PITA Ndị Na-emepụta Ihe Nleba - China PET Food Container Factory & Suppliers
Disposable Plastic Food akpa
Na COPAK, Disposable PLASTIC nri akpa, Plasticala nwere ike itinye ngwa ahịa na-echekwa ma na-egosikwa salads na nri ndị ọzọ jụrụ oyi. Ma ị na-akwado oriri ma ọ bụ na ị na-azụ ahịa na-eri nri, ihe ndị a zuru oke maka ịsa efere.
Disposable PLASTIC nri akpa nwere ike ịbụ akụkụ anọ na akụkụ anọ ma ọ bụ gburugburu plastik dị iche iche yana ọtụtụ ogwe akụkụ.Y nwere ike ịhọrọ Clear deli containers ma ọ bụ nri akpa na ihe mmado ụdị.
PET Deli ihe
PET Deli akpa na ejiri mkpuchi ejiri akara kpuchie si na ihe PET siri ike iji nye ọhụhụ na nchekwa maka ngwaahịa nri gị. Zuru oke maka salads, mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, nri nri na yogọt. Ha bụkwa 100% recyclable gị curbside imegharị ihe maka iji.
Ndị a PITA deli containers na mkpuchi na-ewu ewu wepụta nhọrọ maka nri oyi, sandwiches, mkpụrụ osisi na salads. Ezubere ha ka ha bụrụ nhọrọ nchekwa na-adọrọ adọrọ maka ihe oriri gị ma dị n'ụdị nha na omimi.